सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई झट्का, धमाधम छाड्दैछन् विश्वास पात्रले साथ
शेर बहादुर कुँवर अछामबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन ।
नेकपा एमाले विभाजन हुँदा उनी माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् ।
बुधवार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने क्रममा उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि सनाखत पनि गरेका थिए ।
कुँवरको यो कदमले एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई गृहजिल्लामै झट्का लागेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका कुँवर भीम रावलका विश्वासपात्र मानिन्थे । कुँवर एमाले अछामको अध्यक्ष पनि थिए ।
नेपाल समूहमा लागेकोे भन्दै गत चैत्र २० गते ओली पक्षले उनलाई अध्यक्षबाट हटाएर चन्द्र बोहरालाई अछामको अध्यक्ष बनाएको थियो । पछि रावलले नेपाल समूहको समानान्तर कमिटी विस्तार गर्दा उनलाई अछामको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
सुरुवातदेखि नै कुँवर भीम रावलको पक्षमा थिए । तर नेकपा एमाले फुटमा रावलले आफू निकट कुँवरलाई संगै राख्न सकेनन् ।
भीम रावलको साथ छोडेर कुँवर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेका छन् । आफू निकटलाई आफूसंगै एमाले राख्न नसकेकोले भीम रावललाई गृहजिल्लामै ठूलो धक्का लागेको हो ।
सांसद कुँवरको पक्षमा अछाममा राम्रो जनमत रहेको नेताहरुको भनाई छ । कुँवरले मात्रै होइन, रावलका विश्वासपात्र मानिने अन्य जिल्लाका नेताहरुले पनि उनको साथ छोडेकाले शक्ति क्षयिकरण भइरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
‘हिजोका दिनमा भीम रावलको प्रदेशमा दबदबा थियो । अब त्यो अवस्था नरहने देखिन्छ ।’ एमाले छोडेका एक नेताले दैनिक सञ्चारसंग भने, ‘हामी पनि उहाँ र माधव कमरेडलाई नै नेता मानेर हिडेका थियौँ । उहाँहरुले माधव कमरेडलाई धोका दिनु भयो, हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ ।’
एमाले स्थायी कमिटी बैठकले एकता कार्यदलको १० बुँदे समझदारी कार्यान्वयन र पार्टीका हरेक तहका संरचनालाई २०७५ जेठ २ पूवैकै अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरे पछि रावल सहित मध्यमार्गी भूमिकाका १० नेता एमालेमै फर्किएका छन् ।
नेकपा एमालेको फुटले सुदूरपश्चिममा भीम रावलले पनि आफू निकट नेताहरु गुमाउनु परेको छ ।
गत चैत्र अन्तिम साता रावलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नेपाल समूहको समानान्तर जिल्ला कमिटीका ५ अध्यक्षले उनको साथ छोडेको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोडारी पनि रावलका विश्वास पात्र हुन । तर एमाले फुटमा उनले पनि भीम रावलको साथ छोडेका छन् ।
रावल निकट रहेका उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । सोडारीको प्रदेश सभामा बलियो पकड मानिन्छ । एमाले कैलाली अध्यक्ष समेत रहेका उनलाई चैत्र २० मा ओली पक्षले हटाएको थियो । पछि रावलले उनलाई नेपाल समूहको समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
यता एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद तारालामा तामाङ्गले पनि रावलको साथ छाडेका छन् । रावल निकट तामाङ्ग नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेका छन् । उनी एकीकृत समाजवादी पार्टीको काठमाडौमा भएको भेलामा सहभागी भएका थिए ।
नेपाल समूहमा रहेकाले ओली समूहले तामाङ्गलाई पनि कञ्चनपुर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । पछि रावलकै पहलमा उनी नेपाल समूहको समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष बनेका थिए ।
यस्तै डडेल्धुराका अध्यक्ष डा. तारा जोशी पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमै खुल्ने मनस्थितीमा छन् । सुरुवातदेखि नै नेपाललाई साथ दिएकोले अब पनि उहाँकै पार्टीमा जाने सम्भावना बढि रहेको डा. तारा जोशीले बताए ।
नेपाल निकट उनलाई पनि ओली पक्षले अध्यक्षबाट हटाएको थियो र पछि रावलले डडेल्धुराको समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष चयन गरेका थिए ।
यता नेपाल निकट बझाङ्गका अध्यक्ष दील बहादुर सिंह पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ खुल्ने तयारीमा छन् । उनी ओली समूहले बनाएका अध्यक्ष अफिलाल ओखेडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । सिंहलाई पनि अध्यक्षबाट हटाइएको थियो र रावलको सक्रियतामा नेपाल समूहको समानान्तर कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रावलको पकड बलियो छ । एमालेमा आन्तरिक विवाद रहेका बेला ओली समूहले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न खोजेको थियो । तर नेपाल समूहले त्यो सफल हुन दिएन । त्यसका लागि भीम रावल नै सक्रिय भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई नेपाल समूहले विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाएका थिए ।
नेपाल समूहमा दरो भएर लागेका रावलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलाई असफल पारेका थिए । र पछि नेपाल–ओली समूहबीच कारबाहीको दोहोरी नै चलेको थियो ।
रावलको शक्ति बलियो भएकाले उनको चालकै वरिपरि सुदूरपश्चिमको राजनीति घुम्ने गरेको नेताहरुको बुझाई छ ।
यद्यपी एमाले विभाजनले रावलले अब त्यो शक्ति गुमाउन सक्ने एमालेका एक नेताको दाबी छ ।
‘तत्कालीन नेपाल समूह निकट ४/५ सांसद बाहेक अरु सबै हामीसंग आउँछन् । बहुमत सांसद हाम्रै पक्षमा छन् ।’ ती नेताले भने, ‘प्रतिगमन, निरुकुशतालाई लाद्ने काम गर्नेलाई सहयोग गर्छन भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
सुदूरपश्चिममा सभामुख सहित एमालेका २५ सांसद छन् । तीमध्ये नेपाल समूहमा १७ जना र ओली समूहमा ७ जना खुलेका थिए । नेपाल समूहका ४ जना सांसद अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । अन्य १३ जना भने अझै अन्यौलमा नै छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्वउद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले पनि रावलको साथ छोडेका छन् । उनीहरु नेकपा एकिकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य चयन भएका छन् ।
अध्यादेशले पार्टी रोज्नका लागि २१ दिनको समयसीमा तोकेकोले अहिले नै सांसद को कता भनेर एकिन गर्न गाह«ो रहेको एक सांसदले बताए । ‘कोही कोही नेता/सांसदहरु खुलेका छन् तर अझै सबै खुलेका छैनन् ।’ ती सांसदले भने, ‘अब २/३ दिनभित्रै दिनमा को कता लाग्छन् थाहा हुन्छ ।’